Ifulethi lase-Onifai, imizuzu embalwa ukusuka olwandle
Onifai, Sardegna, i-Italy
I-i-condominium (condo) ephelele ibungazwe ngu-Luca
Ifulethi enginikezayo lise-Onifai, esifundazweni saseNuoro, eduze kakhulu nogu lwase-Orosei, esitezi sesithathu sendlu yangasese. Indawo yokungena izimele, inengadi, indawo yokupaka yamahhala futhi ebekiwe. Ukuze ufinyelele efulethini uzodinga ukugibela izitebhisi ezincane. Leli fulethi linendawo yokuphumula enkulu enomabonakude, ikhishi, igumbi lokulala eliphindwe kabili kanye negumbi lokulala elinemibhede emibili, indlu yokugezela nomshini wokuwasha. Yonke into izungezwe amaveranda lapho ungalengisa khona izingubo zakho. Lokhu kwenza ifulethi likhanye kakhulu futhi libe nomoya omuhle, lilungele ikakhulukazi ukuhlala ehlobo. I-Onifai itholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka olwandle, iyindawo ethule kakhulu futhi enokuthula, elungele ukuphumula.
Indawo yokuhlala inomoya opholile futhi igqamile futhi izungezwe ovulandi. Ukucwiliswa ekuthuleni nasendaweni ephumuzayo, ilungele labo abafuna izinsuku ezimbalwa zokuphumula nokuthula. Kodwa futhi kuhle kwabancane ngoba ifulethi litholakala kumakhilomitha ambalwa ukusuka e-Orosei, indawo yolwandle yeBaronia, ngakho-ke iseduze kakhulu nolwandle. Abaningi bancamela ukuhlala ezindaweni ezizungezile ukuze nje bathole ukuthula bese beya kalula olwandle noma emakilabhini.
Indawo epholile futhi ethule. Kodwa kunoma yikuphi, amakhilomitha ambalwa ukusuka e-Orosei ngakho-ke futhi ekahle kwabancane kunabo bonke.
Salve a tutti, mi chiamo Luca sono sardo e sono un ragazzo di 27 anni, laureato in lingue e comunicazione presso l'università degli studi di Cagliari, dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico di Nuoro. Parlo correntemente lo spagnolo e l'inglese, sardoparlante, ho ottime capacità con la lingua italiana e buona conoscenza della lingua francese. Sono al momento Sindaco del Comune di Onifai
Salve a tutti, mi chiamo Luca sono sardo e sono un ragazzo di 27 anni, laureato in lingue e comunicazione presso l'università degli studi di Cagliari, dopo aver conseguito il diplo…
Ngitholakala kumaSMS, kuWhatsapp, kuma-email nakumacalls.
ULuca Ungumbungazi ovelele